Ku soo dejiso WhatsApp kiniiniga Android, sidee loo sameeyaa? | Androidsis
Markay guriga yimaadaan, ma jiraan wax yar oo ka tagaya taleefanka gacanta una jeedsanaya kiniinka. Si kastaba ha noqotee, waxaan la kulannaa caqabad, WhatsApp kiniin ah Maahan mid caan ah sida aan qiyaaseyno, in kasta oo beddelaado badan ay soo if baxeen waqti ka dib, waa inaad haysataa aqoon yar oo ugu yar oo aad ku yeelan karto WhatsApp kiniin Android ah. Kuwa ugu caansan waa kiniiniyada Samsung Samsung, taasi waa sababta ku soo dejiso WhatsApp kiniin Samsung ah Maaha inay ahaato mid aad u adag, waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida loo sameeyo.
Kiniiniyada ayaa caan noqday waqti ka dib, tan iyo imaatinkoodii sidaan ula dhaqmayno shaashadaha ayaa isbadalay. Si kastaba ha noqotee, waxay ku jiraan saacado hoose, si tartiib tartiib ah u ballaadhinta shaashadaha taleefannada casriga ah ayaa ka dhigtay isticmaaleyaal badan oo sii kordhaya macno yar oo kiniin ah. Si kastaba ha noqotee, nacaybka isticmaalayaasha ee wali qaar haysta oo sii wata inay u helaan ikhtiyaar madadaalo ah iyo in lagu isticmaalo waxyaabaha ku jira guriga, waa mid aad u ballaaran. Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta aysan u jirin soo saare taleefannada casriga ah ee tayada leh oo aan hal ama dhowr kiniin ah ku dhex lahayn safkeeda, markaa markaa waxaan ku tusi doonnaa sida WhatsApp loogu rakibo kiniin Android ah.
1 Si bilaash ah ugu soo dejiso WhatsApp kiniin
2 Sida loo rakibo WhatsApp kiniinka WiFi bilaa SIM
3 Sida WhatsApp loogu isticmaalo mobilkaaga iyo kaniiniga isla waqtigaas
Si bilaash ah ugu soo dejiso WhatsApp kiniin
WhatsApp shaki la’aan waa bilaash, sidaa darteed waxaan si fudud ugu sameyn karnaa WhatsApp. Marka laga hadlayo Android, nidaamkeeda furan wuxuu leeyahay faa iidooyin badan, sidaa darteed way fududahay sida tag bogga rasmiga ah ee WhatsApp oo soo dejiso .apk WhatsApp si loogu rakibo kiniinkeena. In kasta oo qaraaradu aysan fiicnayn, waxay kuxirantahay cabirka kaniiniga aan isticmaaleyno, howlaha asaasiga ah waa la ilaalinayaa. Kiniiniyada badankood nooma oggolaan doonaan inaan ka soo dejino WhatsApp-ka Google Play Store, sidaa darteed, markan beddelka ugu fiican waa bogga rasmiga ah ee WhatsApp, marka lagu daro, sidaa darteed waxaan hubinaynaa inaan soo degsaneyno nooca ugu dambeeya. ee WhatsApp Messenger kiniin ahaan.
Marka la rakibo WhatsApp on Android, nidaamku wuxuu la mid yahay qalab kasta oo kale, lambarka taleefanka, geli lambarka hawlgelinta, waxaanan bilaabi karnaa inaan la sheekaysano kuwa aan la xiriirno.
Waqtiga cusbooneysii whatsapp Kiniiniyada, nidaamka la raacayo wuxuu la mid yahay codsi kasta, inkasta oo aad hayso macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iskuxirka aan hadda kaaga tagnay.
Sida loo rakibo WhatsApp kiniinka WiFi bilaa SIM
Halkan dhibaatadu waxay ka timaaddaa isticmaaleyaasha kumbuyuutarradooda kuma isticmaalaan kaar SIM ah, taasi waa, iyagu ma haystaan ​​kaar kale ama lambar kale oo ay ku kicin karaan koontada WhatsApp, markaa dhibaato weyn ayaan qabnaa. Hagaag, WhatsApp maahan codsi isku dhaf ah, taas oo ah, hal lambar ayaan ku haysan karnaa hal aalad. Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad iibsato a kiniiniga Shiinaha leh 4G oo sii lambar u gaar ah.
Beddelka ugu horreeya waa in laga soo dejiyo mid ka mid ah barnaamijyadan Google Play Store, waa barnaamijyo runtii ah clone macaamiisha Webka WhatsApp, oo waxay noo oggolaan doonaan inaan ku isticmaalno WhatsApp kiniinkeenna, si la mid ah sida taleefannadeenna, isla xiriirrada iyo lambarka taleefannadeenna. Waxa ugu fiican ee ku saabsan bedelkan ayaa ah inuu yahay kan ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee la isticmaali karo, waa inaad ka soo degsataa arjigan linkigan oo aad ka baarto Bidi koodhka qeybta WhatsApp ee ku yaal taleefankeena casriga ah, waa inaan gujino "WhatsApp Web" casriga ah si aad u bilowdo qalabka wax lagu sawiro.
Qaabka kale ayaa ah toos u isticmaal WhatsApp Web, waxaan galnaa www.web.whatsapp.com oo waxaan xareynaa nooca desktop-ka ee biraawsarkeena caadiga ah ee Android. Halkaa marka ay marayso, waxaan iskaanaynaynaa nidaamka Bidi wuxuuna bilaabi doonaa inuu u shaqeeyo sida uu ku shaqeeyo kombuyuutarka.
Sida WhatsApp loogu isticmaalo mobilkaaga iyo kaniiniga isla waqtigaas
Haddii aad ka mid tahay kuwa guriga yimaada oo gebi ahaanba iska ilooba taleefankaaga oo aad doorato kiniinka si aad u hubiso shabakadaha bulshada, emaylka, ku raaxayso taxanaha Netflix ... marka taleefankaaga casriga ahi soo dhaco maxaa yeelay waxaad heshay WhatsApp, uma baahnid inaad u kacdid inaad oroddo si aad u aragto cidda qabta dhiiran ku dhibaya saacadahaaga nasashada.
Intii ay ka socdeen WhatsApp waxay wali ka fekerayaan in la furo codsi qalab badan leh, kaas oo u oggolaanaya gelitaanka koontada ama kumbuyuutar kumbuyuutareedka iyada oo aan taleefanka gacanta la daarin, xalka kaliya ee aan u hayno in aan awoodno ka hubi WhatsApp kiniinkeena waa iyada oo loo marayo biraawsarka.
WhatsApp wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka helno WhatsApp-ka kombiyuutarka adoo adeegsanaya biraawsar taleefanka gacanta ee nambarka la xidhiidha shidan yahayMaaddaama ay u shaqeyso sidii inay ahayd muraayad oo kale, wax kasta oo la helo oo laga jawaabo taleefanka casriga ah waxay ka muuqanayaan nooca webka iyo tan kale.
para ku hayso WhatsApp mobilkaaga iyo kaniinigaaga waa inaan fulino talaabooyinka soo socda:
Ugu horreyntii, waa inaan furnaa biraawsarka aan caadiyan ku isticmaalno kiniinkeenna oo aan marinno web.whatsapp.com. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho Firefox, Chrome ama Samsung Internet Browser haddii aadan dooneynin inaad ku xanuunsato dhibaatooyinka hawlgalka.
Haddii ay dhacdo in muuqaalka websaydhka leh lambarka QR aan la soo bandhigin, waxaan helnaa xulashooyinka biraawsarka oo waxaan raadineynaa ikhtiyaarka Codso goobta desktop.
Marka xigta, waxaan qaadanaa taleefankeena casriga ah iyo marin u helka Menu> Shabakadda WhatsApp kaamiradana waa la hawlgelin doonaa. Waxyar uun ka hooseeya lambarka QR waxaan helnaa ikhtiyaarka lagu calaamadeeyay midka caadiga ah Meel igu qor. Uma baahnid inaad calaamadda ka saarto sanduuqa haddii aadan rabin inaad ku dhex marto nidaamka markasta oo aad rabto inaad ka hesho WhatsApp kiniinka.
Ugu dambayntii, waa inaan ku tilmaannaa kamaradda shaashadda kiniinkeenna si markaa garo aqoonsiga QR in wada sheekaysiga oo dhan la muujiyo oo lagu soo bandhigo biraawsarka sidii inuu yahay nooca shabakadda kombiyuutarada.
Mar alla markii aan ku xirxirno WhatsApp kiniinka si aan u awoodno inaan ka helno farriimaha WhatsApp-ka taleefannadeenna casriga ah ee kiniiniga ah, ayaa ugu habboonaa Abuur toobiye desktop ah kaniinigayaga, si aan markasta gacanta ugu hayno oo aan u baahnayn inaan ka dhex baadho desktop-ka ama khaanadda arjiyada ee kiniinkeena.
Si loo abuuro waddo loo maro websaydhka aan u isticmaalno inaan ka helno WhatsApp kiniinkeena, waa inaan gujinnaa menu xulashada biraawsarka oo raadinaa ikhtiyaarka Ku dar dariiq bogga. Waqtigaas, marin toos ah ayaa lagu dari doonaa desktop-ka kaniinadeena, marin toos ah oo furi doona biraawsarka asalka ah si loo helo koontada WhatsApp sida haddii ay tahay codsi.
Nidaamkan maahan inaad sameyso markasta inaan dooneyno inaan ku helno noocayaga WhatsApp kiniinka, kaliya markii ugu horeysay. Mid ka mid ah dhinacyada ay tahay inaan ku xisaabtano arrimaha ku saabsan shaqadan ayaa ah in haddii loo maro goobaha codsiyada, aan xirno dhammaan kulamada websaydhka ee WhatsApp, waa inaan mar labaad ku dhaqaaqnaa hawshan, WhatsAppna waxay tirtiri doontaa rukhsadda ay siisay biraawsarka. u oggolow marin ka hel qalab kale oo aan ahayn kan casriga ah, sidaas darteed waa inaan dib u qabannaa howsha.